IKhabhinethi yeGypsy kwiFama yeCosmic Turtle
**Iifoto Ezingakumbi ziyeza kungekudala!***
Ikhabhathi yeGypsy kwiFama yeCosmic Turtle yikhabhathi enegumbi elinye epholileyo elungele ukubaleka kubomi besixeko esixakekileyo.
Indawo yethu yi-5 1/2 yeehektare zehlathi lasePristine kuMntla-ntshona.
Ikhabhathi engwevu oza kuhlala kuyo ikwindawo yokuqala yokumisa (iNdlela yendlu encinci) ecaleni kwezindlu ezimbini ezongezelelweyo ezincinci. Le ndlu yakhiwe njengekhaya elikude nekhaya lenye yeentombi zam, ngoko ke inemvakalelo yasekhaya kakhulu.
Nceda unyuke induli kwaye ubone iibhokhwe zethu zasefama ezinobuhlobo!
Ndisebenza kwiphupha elibukhali lesixeko lokuhlala ekhaya kunye nokuzilimela ukutya kwam, lo ibingumsebenzi oqhubekayo kule minyaka ili-12 idlulileyo, kukho amaqhuqhuva apha endleleni ndiqhubeleka nokusebenza kwiprojekthi yam ukugcina iphupha lam linjalo.
Kukho indlu yangaphandle edityaniswe nendlu encinci enendlu yangasese yomgquba, Ishawari ibekwe ngaphakathi "kwindlu yempompo" esisakhiwo esikhanyayo esine-turquoise ene-trim eluhlaza. Ishawari inokufikelela kwiindwendwe emva kwentsimbi yesithoba, ukuba ufuna indawo yokuhlala ngaphandle kweli xesha undithumelele umyalezo kwaye singayenza isebenze.
Nangona ikufutshane kuHola we-99, ndiyathemba ukuba uyakonwabela isilayi sam esincinci sehlathi.
Ndihlala endulini, ke iyipropathi eyahluke kakhulu, Ikhabhinethi ikwindawo esezantsi ecaleni kwezinye izindlu ezincinci ezimbini, ibucala kakhulu kuba abantu bendlu encinci bahlala bodwa ngaphandle kokuba unkqonkqoza kucango lwabo ukuze ukhenkethe, ewe kupholile uya kufuna ukukubona ngaphakathi!
Kukho indawo yokubeka umlilo ecaleni kwendlu eluhlaza, kwaye ngamanye amaxesha uya kufumana inkuni entle ukonwabela umlilo, ukuba awuziva ukhululekile ukubutha ezinye. Le yindawo eqhelekileyo apho umninimzi omncinci avuyayo ukwabelana naye.
Ipropathi yeFama yaseRural Forest hilly permaculture.
-Okona kutya kulungileyo kwaseMexico! Imizuzu emi-2 ukuya emazantsi, ikhitshi laseMexico likaDon Jaun.
-Spud's Produce Market yasekhaya kunye ne-organic
-Ukwenza utywala ngokungafaniyo kunye neNkampani yokuBiyela iTriceratops 11 min eMntla weCTF.
- Lattin's Country Cider Mill kunye neFama yeCidermill zimizuzu emihlanu kude neCTF.
-Iyeza kungekudala // Whitewood Cider Co. Igumbi lokungcamla kunye negumbi leTap
Millerylvania State Park
Umfundisi Point Park
Ndizame ukuba ngumamkeli obalaseleyo.
Kuya kuba kuhle ukwenza ukukhangela kwaye uqinisekise ukuba ukhululekile kwaye zonke iimfuno zakho zihlangatyeziwe. Efowunini (ilizwi okanye umbhalo) okanye ngokobuqu, kuxhomekeke kuwe.
Ndiyavuya ukuncokola kwaye ndikunike ukhenketho okanye ndikushiye wedwa ukuze ube ne-adventure yakho kunye nepropathi.
Kuya kuba kuhle ukwenza ukukhangela kwaye uqinisekise ukuba ukhululekile kwaye zonke iimfuno zakho zihlangatyeziwe. Efowunini (iliz…